၁၉၅၀ ဖက်ရှင်တွေက တစ်ကျော့ပြန် ခေတ်စားလာဦးမှာလား? – FemaleWear.net
ဘယ်တော့မှရိုးမသွားတာ ဖက်ရှင်ပါ။ မိတ်ကပ်တွေကကြာလာရင် ရိုးသွားနိုင်ပေမယ့် ဖက်ရှင်ဆိုတာမျိုးကတော့ တစ်ကျော့ပြန်ဆန်းသစ်တာတို့ ပြန်ခေတ်စားလာတာတို့ ရှိတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ဝယ်ထားတာကြာနေတဲ့အဝတ်အစားတွေဆိုတာလည်း တစ်ချိန်မှာ ပြန် treand ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ အဝတ်အစားဝယ်တာကြိုက်တဲ့ သူတွေကတော့ အရှုံးမရှိပါဘူးနော်။
အခုဘာဖက်ရှင်ကို ပြောမှာမို့ အဲ့လောက်စကားတွေ ရှည်နေရတာလည်းဆိုတော့? 1950 လောက်က အနောက်တိုင်းမိန်းကလေးတွေရဲ့ ဖက်ရှင်အကြောင်းလေးကို တီးခေါက်မိအောင် ပြောပြချင်လို့ပါ။ အရင်ခေတ်ကဆိုတော့ ဒိတ်အောက်နေပြီလို့တော့ မထင်လိုက်နဲ့နော်။ ဖက်ရှင်ဆိုတာ ဘယ်ချိန်ပြန်ဝတ်ဝတ် fashion ပဲလေ။
အဲ့အချိန်တုန်းကတော့ ဂါဝန်အကားတွေတော်တော်အဝတ်များပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ်လွင်စေပြီး အောက်ပိုင်းမှာ ကားကားလေးနဲ့ ဝဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါ။ အရောင်တစ်ရောင်တည်းကိုဝတ်ကြသလို နှစ်ရောင်စပ် သုံးရောင်စပ်တွေလည်းဝတ်ကြပါယ်တယ်။ လက်မှာလည်း အနက်ရောင် ဇာလက်အိတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ကြပြီး ဖိနပ်ကတော့ pencil heel လို ဒေါက်အချွန်လေးတွေ, လေဒီရှူးလေးတွေကို ဂါဝန်နဲ့လိုက်အောင်ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးအသားပျော့လေးတွေကို ရင်ဟိုက်လေးတွေနဲ့ ဂါဝန်လေးတွေကိုလည်းဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ အောက်က ဒေါက်အချွန်လေးတွေနဲ့ဆိုအရမ်းမိုက်
သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် အတိုအပြတ်တွေကို မတွေ့ရသလောက်ပဲ။ အရှည်ကြီးတွေဝတ်ထားကြတာ အပေါ်ပိုင်းကိုသာ ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဟိုက်တယ် ခွဲဝတ်တာ ခြေထောက်ကိုမတွေ့ရသလောက်ပဲ ? အတိုဝတ်မှလှတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သက်သေပြနေတာပါ၊
ရှေ့ဆုံးကဆို ဘယ်သူဝတ်တာကိုပြေးမြင်မိလဲ? မာရီလင်မွန်ရိုးလေးလေ လက်အိတ်လေးတွေ ဒေါက်ချွန်ချွန်လေးတွေ အိတ်အသေးလေးတွေကို လက်မှာကိုင်ကြတာက 1950 ရဲ့ဖက်ရှင် သကေတတစ်ခုပါ။
Accessories လေးတွေကလည်း ဖက်ရှင်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပံ့ပိုးပေးတော့ မေ့ထားလို့မရဘူးလေ။ ဒါလေးတွေကတော့ 1950 လောက်က မိန်းကလေးတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ accessories လေးတွေပါ။ ဖိနပ်ကလည်း ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့အရောင်တူ, လက်အိတ်နဲ့ဆိုတော့ တကယ့်ကို gorgeous fashion ပါပဲ။
စကတ်လေးတွေကိုလည်း ဝတ်တတ်သလို အပေါ်ကအဖြူလေးတွေနဲ့တွဲဝတ်တော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး တည်ငြိမ်စေတာပေါ့။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီတွေဝတ်ရင်လည်း ခါးနေရာမှာ ကြပ်ထားပြီး တင်နေရာမှာပွနေတဲ့ပုံမျိုးကို ဝတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်လုံးအသားပေးတဲ့စတိုင်လ်မျိုးတွေက 1950 က အမှတ်အသားတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေတာ။
ကဲ ဒီတော့ 1950 ဖက်ရှင်တွေက ဒီ ၂၁ ရာစုမှာ ပြန်ခေတ်စားလာနိုင်သလား ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့လေ။